Gusset နှင့်ဇစ်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူနှင့်အတူစျေးပေါသော ၁၀၀% ချည်ပတ္တူစျေးဝယ်အိတ်တစ်လုံး Zhihongda
Non- ယက် D-Cut အိတ်
လေဆာရောင်ခြည်မွှေသော Non Non ယက်အိတ်
ultrasonic မဟုတ်သောယက် Tote
Bottom Gusset နှင့်အတူချည် Canvas အိတ်
ချည် Canvas ကွက်အိတ်
Gusset နှင့်အတူချည် Canvas တုတ်
ချည် Canvas ဇစ်လွယ်အိတ်
ရိုးရိုးလဲမှို့ Kanvas တုတ်အိတ်
Bolsa de Alimentos အဖြူရောင်နေ့လည်စာ Cooler Bag အိတ် ...
Bolsas De Regalo ကုန်စုံအိတ်လက်ကိုင်အိတ် ...
စိတ်ကြိုက်ဇစ်ခေါက်နိုင်သော Non Non ယက်ခေါက်သိမ်းနိုင်သောအဝတ်ကိုအထည် ...
Zipper ပန်းရောင်အပြာရောင် Nonwoven Thermal Bag အိတ်များကို Seafo မှထုတ်ပါ ...
စိတ်ကြိုက်အရောင်ဖော်ရွေ Eco အနက်ရောင်တွဲဖက်မှု ...
Eco-Friendly ကြိုးဆွဲကြိုးလွယ်အိတ်လက်ဆောင်အိတ် Drawstri ...
ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောအော်ဂဲနစ်ကုန်စုံစျေးဝယ် Eco friendly 100% ...
အမှတ်တံဆိပ် G အမှတ်တံဆိပ် G အတွင်းရှိ 12oz လေးသောအကြီးစားခရီးသွားအိတ်များ ...
စျေးပေါသော ၁၀၀% ဂွမ်းကာဗပ်စျေးဆိုင်စျေးဆိုင်နှင့်အတူတိတ်အိတ် ...
ကုန်စုံစျေးဝယ် Eco-friendly 100% ဝါဂွမ်းပတ္တူစုစုပေါင်း ...
Logo-Print အော်ဂဲနစ်ဝါဂွမ်းပတ္တူထည်အချည်မျှင် B ...
Gusset နှင့်ဇစ်ပါသောစျေးပေါသော ၁၀၀% ချည်ပတ္တူစျေးဝယ်အိတ်တစ်လုံး
ကျနော်တို့ 100% စိတ်ကျေနပ်မှုအာမခံချက်ကိုဆက်ကပ်။ ဤထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြwithနာရှိပါကဝန်ဆောင်မှုအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
Eco-Friendly တုတ်အိတ်များသည်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၁။ ဒီအိတ်ကသင့်တော်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအောက်ခြေမှာပါ ၀ င်တဲ့တည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူရှည်လျားသောလက်ကိုင်များကိုရှာဖွေနေသည်။
2. ကျွန်တော်တစ် ဦး 100% စိတ်ကျေနပ်မှုအာမခံချက်ကိုဆက်ကပ်။ ဤထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြwithနာရှိပါကဝန်ဆောင်မှုအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
3 .. Eco-Friendly တုတ်အိတ်များသည်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၄။ ဒီမြှင့်တင်ရေးတုတ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထည်လက်ကိုင်တွေရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်လက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဒီခေါက်နိုင်သောပေါ့ပါးသည့်ပတ္တူအိတ်တစ်လုံးသည်ကျယ်ဝန်းသည့်အဓိကအခန်းတစ်ခန်း၊ ၃ "D အောက်ခြေ Gusset ရှိပြီးကျယ်ပြန့်သောပါးစပ်သည်သင်၏ပစ္စည်းများကိုလွယ်ကူစွာ တင်၍ ချနိုင်သည်။
၅။ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်အရည်အသွေးမြင့်ပတ္တူအိတ်များသည်ကုန်စုံစျေး ၀ ယ်ခြင်း၊ ကျောင်း၊ အလုပ်၊ ခရီးသွားခြင်း၊ အားကစားရုံ၊ ကမ်းခြေ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ထုံးစံ DIY၊
6.SIZE: သင်ရွေးချယ်နိုင်သောအရွယ်အစားအမျိုးမျိုး။ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးလိုအပ်ချက်များ၊ လက်ဆောင်များ၊ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကြော်ငြာခြင်း၊
ပစ္စည်းအမည် Gusset နှင့်ဇစ်ပါသောစျေးပေါသော ၁၀၀% ချည်ပတ္တူစျေးဝယ်အိတ်တစ်လုံး
အသုံးပြုမှု စျေးဝယ်ခြင်း၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးလက်ဆောင်၊ ထုပ်ပိုးခြင်း၊ အ ၀ တ်အစား၊ စသည်တို့
ပစ္စည်း ချည်ပတ္တူ 100% ချည်, 4-20oz, 100gsm-570gsm, 6oz (175gsm), 8oz (230gsm), 10oz (280gsm), 12oz (340gsm)
အရွယ်အစား 10x15cm, 15x21cm, 20x25cm 25x30m 30x35cm 35x40cm (သို့) စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား။
အရောင် သဘာ ၀ အရောင်၊ အဖြူ၊ အနက်ရောင် (သို့) သင့်တောင်းဆိုချက်အရအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပေးသည်။
ပိတ်ပွဲ လဲမှို့ကြိုး, လိမ်ကြိုး, etc
ပုံသဏ္.ာန် ပြားချပ်ချပ်, စတုရန်းအောက်ခြေ, ပတ်ပတ်လည်အောက်ခြေ, စတုရန်းအောက်ခြေနှင့် gusset
OEM & ODM ဟုတ်တယ်၊
ပုံနှိပ်ခြင်း ပိုးမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ သတ္တုပါးကြေးနှင့်အပူလွှဲပြောင်းခြင်းပုံနှိပ်ခြင်း၊ အပူပေးသောပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
အချိန်ကိုထုတ်လုပ်ပါ 15-25 ရက်, သင်၏အရေအတွက်အရသိရသည်။
ထုပ်ပိုး 200 PC / Carton သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရ
တင်ပို့ခြင်းနည်းလမ်း ပင်လယ်အားဖြင့်, လေကြောင်းအားဖြင့်, အမြန်အားဖြင့်
နမူနာ ၁) ။ နမူနာအချိန်: 3-5 ရက်အတွင်း။
2) ။ နမူနာတာဝန်ခံ: ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အရသိရသည်။
၃) နမူနာပြန်အမ်းငွေ: ဟုတ်ကဲ့သောအခါကြီးမားသောပမာဏ
၄) နမူနာပို့ဆောင်ခြင်း: UPS, FedEx, DHL,
ငွေပေးချေမှုသက်တမ်း ကြိုတင်၍ T / T ဖြင့် ၃၀% အပ်ငွေ၊ တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ T / T မှ ၇၀% ချိန်ခွင်
L / C, D / A, D / P, Western Union, Paypal, Visa, Debit Card, Credit Card
FOB ဆိပ်ကမ်း Chengdu သို့မဟုတ်ရှန်ဟိုင်း။
Silkscreen Printing: အရောင်အနည်းငယ်ပါသောဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုပါ။
အပူလွှဲပြောင်းခြင်းပုံနှိပ်ခြင်း - သေးငယ်သောဖုံးအုပ်မှုနှင့်အရောင်မျိုးစုံပါသောဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုပါ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်ခြင်း - ကြီးမားသောဖုံးအုပ်ထားသည့်အရောင်မျိုးစုံပါသောဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုပါ။
သင်၏ပုံနှိပ်ခြင်းလိုအပ်ချက်ကိုပြောပြပါ။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ဒီဇိုင်းအနုပညာလက်ရာများကိုပို့ပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးပုံနှိပ်နည်းကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။
ဝါဂွမ်းစည်အိတ်များပြုလုပ်ရန်အများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၆oz (၁၇၅ gsm)၊ 8oz (230gsm), 10oz (280gsm), 12oz (340gsm) ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည်။ သင်လိုချင်သည့်အတိုင်းအခြားအထူပစ္စည်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်၏တောင်းဆိုမှုများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
သင်အရောင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောအရောင်များအတွက်ဝါဂွမ်းပတ္တူပစ္စည်းထောက်ပံ့။ များသောအားဖြင့်သဘာဝအရောင်သည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဘယ်အရောင်ကိုလိုချင်လဲပြောပြပါ
ဝါဂွမ်းအိတ်အမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ မင်းမှာဒီဇိုင်းရှိရင်ပိုကောင်းတယ်။ သင့်တွင်မည်သည့်ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကူးမရှိပါက၎င်းသည်အရေးမကြီးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဝါဂွမ်းအိတ်များထုတ်လုပ်သည့်အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးသင့်အတွက်အကြံဥာဏ်များပေးနိုင်သည်။
လဲမှို့ / ပတ္တူအိတ်
1. Q: ကျွန်ုပ်၏အိတ်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ မင်းတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အရအိတ်တွေကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
2. Q: ကျွန်ုပ်၏ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ပုံနှိပ်နိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ငါတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာမင်းရဲ့တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်နိုင်တယ်။ သင်၏လိုဂိုဖိုင်ကို PDF သို့မဟုတ် AI ပုံစံဖြင့်ထောက်ပံ့ရန်သာကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။
၃။ မေး။ ထုတ်ကုန်ဘယ်လောက်ကျလဲ။
A: စျေးနှုန်းများကိုပစ္စည်း၊ စတိုင်၊ အရွယ်အစားစသဖြင့်အချက်များစွာဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကုန်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များကိုပြောပါကကျွန်ုပ်တို့အတွက်သင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းပေးနိုင်သည်။
4. မေး: ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ကဘာလဲ
A: ၁၅-၂၅ ရက်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ အရေအတွက်ပေါ်မူတည်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးမင်းလိုချင်တဲ့ရက်ကိုပြောပြပါ။
၅။ မေး။ ။ မမှာယူခင်မှာနမူနာတစ်ခုရနိုင်သလား။
A: အရည်အသွေးနှင့်ပစ္စည်းစစ်ဆေးရန်အတွက်စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ခြင်းမရှိသောစတော့ရှယ်ယာနမူနာများကိုသင်၏စာပို့အကောင့်တွင်အခမဲ့ပေးနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အခမဲ့နမူနာပေးပို့ဖို့ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်။
၆။ မေး။ နမူနာထုတ်လုပ်ချိန်အတွက်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
A: လက်ရှိနမူနာများအတွက် 1 ရက်။ စိတ်ကြိုက်နမူနာ 3-5 ရက်။
၇။ Q: ကျွန်ုပ်၏မှာကြားမှုကိုဘယ်လိုတင်ပို့ရမလဲ။ ငါ့အိတ်တွေအချိန်မီရောက်မလား?
ဖြေ။ ။ ပင်လယ်၊ လေကြောင်း၊ အမြန်သယ်ဆောင်သူများ (UPS, FedEx, TNT) ဖြတ်သန်းတဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ပါတယ်
၈။ Q: ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကဘာလဲ။
A: 30% T / T သိုက်၊ ပစ္စည်းမပို့မီ ၇၀% လက်ကျန်ငွေ။
30% T / T သိုက်, BL ဆန့်ကျင် 70% လက်ကျန်ငွေ။
ကြိုတင်ငွေ ၁၀၀% ကြိုတင်ထုတ်ပေးထားသည့်ငွေပမာဏအတွက် Western Union၊ Paypal၊
၉။ မေး။ ။ ကိုးကားရန်လိုသောအသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါမည်။
ဖြေ။ ။ ပစ္စည်း၊ အရွယ်အစား၊ စတိုင်၊ အရောင်၊ လိုဂိုပရိုဖိုင်း၊ လိုဂိုအရွယ်အစား၊ လိုဂိုပုံနှိပ်ခြင်း၊ အရေအတွက်နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ။
ရှေ့သို့ Custom logo ကြီးမားသောပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစျေးဝယ်အိတ်များရောင်းရန်ကြိုးဒီဇိုင်းနှင့်အတူတုတ်
နောက်တစ်ခု: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တံဆိပ်ကပ်ထားသည့် Gusset Silkscreen Tote Bag အတွင်းရှိ 12oz Heavy Duty Eco ခရီးသွားအိတ်များ Canvas စျေးဝယ်အိတ်
OEM ကွက်လပ်သည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်စျေးဝယ်ထားသောပတ္တူစ ...
စိတ်ကြိုက်အရည်အသွေးမြင့်ပုံနှိပ်လိုဂိုအနက်ရောင် Cott ...
ပတ္တူအိတ်အစုအဝေးအိတ်ကပ်ဖက်ရှင်ဝါဂွမ်း drawstr ...
စျေး ၀ ယ်သည့်ချည်ထည်ပခုံးဇစ်ပါ Messen ...
မြှင့်တင်ရေး Eco အလွတ်မီးခိုးရောင်ဝါဂွမ်းပတ္တူအိတ် ...
Chengdu zhihongda ရက်ကန်းသားအိတ် Co. , Ltd.
ဖုန်းနံပါတ်: 0086 15184479681